Wasiirku Waxa Uu Ballanqaadayaa La-talin Adag oo Dheeraad ah iyo Kormeerka Qalin-jabinta Shannon
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Wasiirku Waxa Uu Ballanqaadayaa La-talin Adag oo Dheeraad ah iyo Kormeerka Qalin-jabinta Shannon
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Education • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Dalxiiska Sylvestre Radegonde ayaa ballan qaaday Guddi la-talin oo lagu kalsoonaan karo si ay ula socdaan ardayda ka qalinjabisay Kulliyadda Shannon si loo hubiyo in barnaamijka martigelinta uu buuxiyo ujeeddadeeda dhalinyarada Seychellois ee dhalinyarada ah ee haysta jagooyinka maamulka dhexe iyo maamulka ee xarumaha dalxiiska ee Seychelles, wax ay tahay wuu ku guul daraystay inuu sameeyo.
Waxa lagaga dhawaaqay kulan ay koox labaad oo ka kooban 25 ka qalin jabisay Shannon oo lagu qabtay Botanical House maalintii Khamiista ee bishu ahayd 18-kii November si ay u dhagaystaan ​​sababta in ka yar 50% ardayda ka qalin jabisay barnaamijka ay wali ku jiraan warshadaha soo dhawaynta ama waaxda dalxiiska iyo in yar oo ka mid ah kuwa hadhay ayaa haya jagooyin maamul. Isagoo ka hadlayay in Seychelles wadan ahaan aysan lumin marka qofka qalin jebiyay uu ka tago qaybta martigelinta si uu uga shaqeeyo mid kale, wasiirku wuxuu sheegay in tani aysan ahayn ujeedadii loogu talagalay barnaamijka oo halis u ah in la fuliyo.
90 Seychelles ayaa ilaa hadda ka qalin jabiyay barnaamijka maaraynta martigelinta ee afarta sano ah oo ay ku jiraan saddex sano Dalxiiska Seychelles Akadeemiyada iyo hal sano oo u dambeeyay oo lagu qabtay Kolejka Shannon ee Ireland tan iyo markii ardaydii ugu horreysay ay ka soo qayb galeen machad Irish ah 2012. Wasiirka ayaa muujiyay rabitaankiisa inuu ka maqlo ardayda ka qalin jabisay khibradahooda goobta shaqada, caqabadaha ay la kulmeen, waxa niyad jabiyay oo ku qasbay inay ka baxaan. warshadaha iyo sidoo kale maqalka soo jeedintooda ee xalalka suurtagalka ah ee lagu beddeli karo xaaladdan.
Ardayda qalin jebisay ayaa muujiyay la'aanta fursadaha horumarineed iyo la socodka barnaamijyada tababarka, fadhiyo aan joogto ahayn ama aan jirin oo mid ka mid ah oo ay la yeesheen kormeerayaasha iyo maamulka si loola socdo horumarka iyo in la ogaado shuruudaha horumarinta iyo sidoo kale la-shaqeyn la'aanta macallimiinta iyo Wasaaradda Shaqaalaynta . Kuwa weli ku jira warshadaha, qaar badan ayaa la socda guryaha Hilton, oo ah shirkad u taagan inay raacdo barnaamijyada tababarka maamulka.
Qalinjabiyeyaasha ayaa la wadaagay in loo gudbiyo shaqaalaha ajnabiga ah marka fursadaha dalacsiinta ay soo bandhigaan, kormeerayaasha Seychelles waxay u arkaan inay khatar ku yihiin horumarkooda, iyagoo weli ku jira xirmooyinka heerka gelitaanka ka dib sanado shaqo. Kuwo kale ayaa ka hadlay in aanu jirin qorshe tababar, loo diiday fursado ay ku horumariyaan iyo in aan loo diyaarin maamulka, in ay ka baxaan oo ay ka shaqeeyaan qaybo kale oo ay ka mid yihiin kalluumeysiga, caymiska, iyo ilaalinta macaamiisha, iyo kuwo kale, inkastoo ay jecel yihiin warshadaha.
Wali qaar kale oo qaadanaya layliyo dheerad ah iyo tababbarka maaraynta ayaa tafaasiil tafatiran oo cadaadis ku saaray iyaga iyo qoysaskooda ANHRD ku noqo Seychelles isla markiiba ka dibna lagu daayo qalabkooda shaqo la'aan marka ay soo noqdaan.
Qaar ka mid ah qalin-jabiyeyaashu waxay tafatireen sheekooyinka guusha, iyagoo ku baraarujinaya kuwa kale inaysan ku filnayn inay soo baxaan, laakiin inay ka go'an tahay oo ay diiradda saaraan oo ay ku faanaan shaqadooda, si ay u xoojiyaan qiyamka Shannon si ay u helaan xirfad abaal-marin ah ee warshadaha.
Wasiirka ayaa ka dib markii uu dhagaystay xisaabaadka ardaydii qalin jabisay waxa uu bogaadiyay ardaydii qalin jabisay guulihii ay soo hooyeen waxana uu sheegay in tababarka afarta sano ah uu ahaa mid aad u adag ka hor inta aanu la wadaagin qorshihiisa mustaqbalka si uu u hubiyo in barnaamijku gaadho ujeedooyinkiisa oo ah in la helo boqolkiiba boqol aad uga sareeya Seychelles. xilalka maamulka.
Si taas loo sameeyo, wasiirku wuxuu sheegay inuu dhisi doono guddi la-talin oo la isku halleyn karo, guddigaas oo la shaacin doono ka dib markii uu la kulmo kooxdii saddexaad ee ugu dambaysay ee Shannon. "Waxaan rabnaa inaan si buuxda u bedelno sida barnaamijyada latalinta, tababarka iyo kormeerka ee hoteellada ay u shaqeeyaan," ayuu yiri wasiir Radegonde. "Ma dhaheyno qaar ka mid ah la-taliyayaasha ma ahan kuwo dhab ah, si kastaba ha ahaatee, qaar badan ayaa eegaya danahooda gaarka ah. Waxaa laga yaabaa inay haystaan ​​dad ay rabaan inay qabtaan jagooyinkan ama falsafadooda shirkadeed ayaa laga yaabaa inay u baahdaan in jagooyinkan maamulka uu hayo qof ajnabi ah. Markaa waa inaan bedelnaa tan si aan u saarno dad ka mid ah guddigan oo runtii kula shaqeyn doona adiga iyo asxaabtaada si loo hubiyo inaad gaarto heerar kartiyeed ee hore loo go'aamiyay. Ma beddeli kartid qoraallada yoolka markaad sii waddo. Waxaan yeelan doonaa qorshooyin tababar oo cad, qorshooyin isku xigxiga, waxaanan magacaabi doonaa dad si loo hubiyo in kuwan la kormeero lana fuliyo. Waxaan la socon doonnaa shaqada guddigan iyo waxa ka socda dhismaha aad ka shaqeyneyso si aan u hubinno inay daacad ka yihiin ballanqaadyadooda. Shirka horumarka ee mid-ka-mid ah bishii hal mar ayaa ah ugu yaraan. Waxaan la yeelan doonnaa hal kulan oo kale ardayda qalin-jabisa ka dib waxaan ku dhawaaqi doonnaa xubnaha guddiga la-talinta iyo qorshayaashayada,” ayuu la wadaagay.
Wasiir Radegonde oo ardayda qalin jebisay ku dhiiri galiyay inay adkaystaan ​​waxa uu yidhi “Waxaan rabaa in aan idinku dhiiri galiyo, in aan idin sheego ha is dhiibina. Kuwa ka tagay, oo shaqo ka bilaabay qayb ay ku faraxsan yihiin, qaar ganacsigoodii bilaabay ama waxbarasho kale qaatay, nasiib wacan. Waa inaad ku faraxsan tahay inaad sameyso waxaad rabto inaad sameyso. Laakiin kuwiinna ku fikiraya inaad tagtaan, waxaan rabaa inaan idiin sheego, hadda ha quusanina, ee xajiya, wax baanu hagaajinaynaa.” Isaga oo u ballan qaaday waaxda dalxiiska siyaasad albaabada u furan, waxa uu xaqiijiyay in waaxda dalxiisku ay wali u furan tahay talooyinka ardayda qalin jabisay. " Xor ayaad u tahay inaad noogu timaadid sidoo kale arrimaha aan ku caawin karno," ayuu yiri wasiirku.
Iyadoo u mahadcelinaysa ardaydii ka qalinjabisay wakhtiga ay u hureen kulanka, Xoghayaha Guud ee Dalxiiska Sherin Francis ayaa ku bogaadisay guusha ay ka gaareen in ay ka qalin jebiyaan koorso afar sano ah oo aad loo baahnaa iyo aragtida miisaaman ee ay ka dhiibteen. "Waxaan rabnay fikradaada iyo soo jeedintiina si aad dib ugu bilawdo barnaamijka oo aad u keento macnaha dhabta ah ee ereyga la-talinta. Waxaan u baahanahay in aan ogaano daldaloolada, meelaha ku wanaagsan, iyo meelaha ay ku liidato. Weli waxaa jiri doona baahida ajaanibka ee xilalka maamulka - si kastaba ha ahaatee, waa in aad haysatid boqolkiiba sare oo idinka mid ah jagooyinka maamulka," PS Francis ayaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyey.